अभिमत : अबको मुलुक कस्तो बन्नुपर्छ ? – Janaubhar
अभिमत : अबको मुलुक कस्तो बन्नुपर्छ ?
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस १७, २०७४ | 164 Views ||
नयाँ संविधान अनुसार मुलुकमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा तीनका उम्मेदवारहरुले मुलुकको अबको बाटो आर्थिक समृद्धि भनेका थिए । उनीहरु मध्ये कतिपयले कुनै त कतिपयले कुनै योजना प्रस्तुत गरे । हामीले पनि यस विषयमा जनताको अभिमत संकलनको प्रयास गरेका छौं । घोराहीका विभिन्न क्षेत्रमा भेटिएका व्यक्तिहरुसँग नौलो जनउभारका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले लिएको अभिमत । –सम्पादक
आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
केबी मसाल, वरिष्ठ पत्रकार
मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । अब देश समृद्धिको दिशामा जानुपर्छ । समृद्धि भनेको नेताहरुले भन्ने गरे जस्तो त्यति सजिलो विषय होइन । यसका लागि स्पष्ट योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग धन्दाको स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपालले पहिलो पटक संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । संघीयतामा स्वभाविक रुपमा आर्थिक भार धेरै हुन्छ । हामीले आर्थिक स्रोतको उचित पहिचान गर्न सकेनौं भने मुलुक धराशायीको दिशामा जाने खतरा हुन्छ । त्यसका लागि कर मात्र बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । कर संकलन अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख स्रोत हो । तर, हामीले यसका अन्य स्रोतहरुको पनि खोजी गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले उद्योगधन्दा खोल्नैपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्छ । अहिले पनि नेपालमा धेरै खाद्य उत्पादन विदेशबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि हामीले उत्पादनमा ध्यान दिनै पर्छ ।
अर्को कुरा, हामी सबैमा चरित्र सुधार हुनुपर्छ । मुख्य रुपमा देशको नीति निर्माण र विकासको खाका कोर्ने तहमा पुगेका नेताहरुको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ । उनीहरुले काम गर्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । आफू र आफ्नाका लागि केन्द्रित गरिने विकास र समृद्धिले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन ।
अर्को कुरा मलाई अहिलेको संघीय संरचना मन परेको छैन । यो संरचनाले स्रोतको उचित बाँडफाँड र प्रयोग हुन सक्दैन । हामीले हरेक प्रदेशलाई हिमाल, पहाड र तराईसँग जोड्नै पर्छ । तब मात्र सबै प्रदेशको समानुपातिक ढंगले विकास हुनुपर्छ । राजनीतिप्रति आम मान्छेको बुझाइ गलत छ । यो हाम्रा नेताहरुको गतिविधिले नै नगराएको हो । त्यसैले नेताहरुले यस विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनैपर्छ । अब सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देशको समृद्धितर्फ जानुपर्छ ।
युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ
अम्बिका पोख्रेल, युवा
हाम्रो देशमा धेरै युवाहरुले रोजगारीको अबसर पाउन नसकेका छैनन् । बेरोजगारी नै नेपालको प्रमुख समस्या हो । राज्यले युवाहरुलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ ।
अहिले पनि नेपालका करिव ५० लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको श्रमले गर्दा धेरै मुलुकहरुले आर्थिक फड्को मारिसकेका छन् । तर, हामी अहिले पनि विश्वमै कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा दर्ज भएका छौं । सरकारले तत्काल विभिन्न ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा कानूनी रुपमा महिला समानताका कुरा आए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न्यायमा समान पहुँच अहिलेको आवश्यकता हो । कानूनी रुपमा नभए पनि सामाजिक रुपमा महिला भएकै कारणले धेरै ठाउँबाट महिलाहरु अबसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारले महिलाहरुका लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनै पर्छ । समान अधिकारले मात्र पुग्दैन महिलाहरुको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि योजना बनाउनुपर्छ । किनकि समाज अवसर भए पनि महिलाहरु अहिले तत्कालै पुरुषसरह अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यो महिलामा समस्या भएर होइन ।
हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट ग्रसित छ । कोही महिला अघि बढ्न खोज्यो भने त्यसलाई नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिन्छ । अब राज्यले महिलाहरुलाई सहारा प्रदान गर्नुपर्छ ।
सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ
तेजविक्रम रावत, व्यवसायी
अर्थतन्त्र मुलुकको प्रमुख मेरुदण्ड हो । मुलुकको विकासका लागि आर्थिक विकास हुनै पर्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिसकेका छन् । तर, अहिले पनि नेपाल विकाशोन्मुख अवस्थामै छ । लामो समयसम्म हामी मुलुकको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भनेर विवाद गरिरह्यौं । भएका उद्योगधन्दाहरु पनि बन्द भए । नयाँ उद्योगधन्दाहरु खुल्न सकेनन् । विदेशी लगानी आउन सकेन ।
अब मुलुकका स्थायी सरकार बन्नैपर्छ । अब बन्ने सरकारले लागनीकर्ताहरुको मन जित्नुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुपर्छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन पर्छ । विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट पलायन भइरहेको पूँजीलाई नेपालमै राख्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरुमा राज्यले व्यवसायीहरुलाई विभिन्नखाले सेवा सुविधा दिइरहेको हुन्छ तर, नेपालमा त्यस्तो प्रचलन छैन ।
ऊर्जा संकट नेपालको प्रमुख समस्या हो । ऊर्जा संकटकै कारणले नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । पूराना सञ्चालन भइरहेका उद्योगधन्दाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवसायीहरुको लगानीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनै पर्छ । अब मुलुकमा बन्द हड्ताल र विभिन्न नाममा हुने आन्दोलनहरु रोकिनुपर्छ । उद्योगधन्दा तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरुमा राजनीति गर्ने काम बन्द गर्नैपर्छ । नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रमा नै राजनीति गर्ने काम गरियो । यसले समस्या उत्पन्न गरेको हो ।
अहिले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । धेरै युवाहरु विदेशमा पलायन भइरहेका छन् । तर, स्वदेशी उद्योगधन्दामा काम गर्ने जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई निःशुल्क उचित प्राविधिक तालिम र व्यावसायिक तालिम दिनुपर्छ । वस्तुको व्यापार भन्दा पनि वस्तुको उत्पादनतर्फ युवाहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । किसानहरुलाई उन्नत बीउ मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिचाई सुविधा बढाउनु पर्छ । कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ
अंशु पाण्डे, विद्यार्थी
शिक्षा मानवको आधारभूत आवश्यकता नै बनेको छ । केही पहिलेसम्म गाँस, बास र कपासलाई मात्र आधारभूत अवाश्यकता भनिन्थ्यो । अब त्यो परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । उचित शिक्षा बिना मुलुकको विकास हुनै सक्दैन । अहिलेसम्म नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको उचित विकास हुन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षा बिना हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौं । गरिब परिवारका विद्यार्थीहरु अहिले पनि उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरुलाई हामीले माथिल्लो तहसम्म नै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
धेरै पढे लेखेका युवाहरु पनि अहिले बेरोजगार भइरहेका छन् । उनीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनैपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई नैतिक शिक्षा पनि दिनुपर्छ । उनीहरुलाई राष्ट्र के हो भनेर चिनाउन जरुरी छ ।
अहिले धेरै विद्यार्थीहरु कुलतमा फसेका छन् । कुलतमा फसेका विद्यार्थीहरुलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ । छात्राहरुको लागि सरकारले विशेष प्याकेज लिनुपर्छ ।
Prevछाडा गाईगोरुको जिम्मा स्वस्तिक सहकारीलाई
Nextराप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सुविधा थपिदै